Xildhibaan C/qaadiroow Wasiir Axmed Muuniin Seed bulshada Og Waxqabadkiisa Iyo sharaftiisa. Qalinkii Cabdilahi Axmed Caarshe.
Thursday May 06, 2021 - 18:37:52 in Wararka by Super Admin
Xildhibaan C/qaadir Jibriil Tukaale, waxaa uu eed aan sal iyo raadtoona lahayn u soo jeediyey Wasiirka beeraha somaliland oo ku jira wasiirada ugu waxqabadka badan wasiirada madaxweyne muse Biixi Cabdi.
Mudadii uu ahaa Axmed muunin Seed Wasiirka horuumarinta beeraha somaliland, weli laguma sheegin maanul-xumo, musmaasuq iyo eex-toona, waxaa uu hormood u yahay wasiirada ugu waxqabadka wanaagsan,marka la eego sida uu wasaarada u dhisay iyo mashaariicda beeraha ee uu dalka ka fuliyey muddadii uu wasiirka ahaa.
Hadaba xildhibaan C/qaadir isaga oo ka waayey dano gaar ah wasiirka ayuu aflagaado raqiis ah la soo fadhiistay warbaahinta, isaga leh wasiirku waa musuqmaasuq ee hanti-dhowr ha la geliyo.
Hadalada aflagaadada ah ee ka soo yeedhay xildhibaan waxay nuujinayaan milgo xumada C/qaadir iyo in uu raadinayo in wasaarada laga laaluusho, isaga oo ah xildhibaan ka aan soo xaadirin shaqada baarlamaanka, waana dadka habeenkiina soo jeeda maalintiina hurda.
Sidoo kale xildhibaan C/qaadir maaha shaqsi wax ka og waxaa dalka ka socda,xataa caruurtiisa ayaanu schoolka u raacin marka lagu yidhaahdo aabihiin keena.
Xildhibaan c/C/qaadir waa shaqsiga noocaas ah waxaa ahaan jirey agaasimaha guud ee wasaarada Beeraha waqtigii ay wasaaradu ugu liidatey, markii la bedelay waxaa laga soo reebi kari waayey gaadhigii wasaarada.
Hadaba waxaan odhan lahaa xildhibaan C/qaadir nin aanad gaadhi karin ha ku dabo daalin.
Waa la wada ogyahay sharafta iyo karaamada wasiir Ahmed muumin seed, waana wasiirkii horuumarka somaliland.